USteyn usethubeni lomlando koweScotland
U-FRANS Steyn usethubeni lokuqopha irekhodi leminyaka angu-15 esenkundleni kumaBhokobhoko uma elakuleli selibhekene neScotland ngempelasonto Isithombe: BACKPAGEPIX
INGWAZI yamaBhokobhoko, uFrans Steyn, inethuba lokuqopha umlando eqenjini lesizwe uma selibhekene neScotland emdlalweni wesibili wohambo lwase-Europe ngoMgqibelo.
Umdlalo uzoqala ngo-3 ntambama eBT Murrayfield, e-Edinburgh.
USteyn (34) uzowuqala ebhentshini lo mdlalo kanti uma ethola ithuba lokungena enkundleni uzoba ngowokuqala ukudlalela amaBhokobhoko iminyaka engu-15. Wadlala okokuqala eqenjini lesizwe libhekene ne-Ireland ngo-2006.
Umqeqeshi wamaBhokobhoko, uJacques Nienaber, wenze izinguquko ezintathu eqenjini elihlule iWales ngo-23-18 eCardiff ngempelasonto edlule.
UWillie Le Roux uzongena endaweni kaDamien Willemse olimele kwi-fullback, u-Elton Jantjies athathe indawo ka-Handre Pollard kwi-flyhalf kuthi u-Franco Mostert angene esikhundleni sika-Lood de Jager kwi-lock.
US’bu Nkosi ojoyine leli qembu ekuqaleni kwaleli sonto ngemuva kokulungisa amaphepha akhe okuhamba, akafakwanga eqenjini okusho ukuthi uJesse Kriel uzophinde awuqale umdlalo ophikweni lakwesokudla.
UKriel noMostert bazobe behlanganisa imidlalo engu-50 eqenjini lesizwe.
“IScotland izosinika inselelo eMurrayfield, ngakho bekubalulekile ukuthi sigcine iningi labadlali abadlale ngempelasonto edlule,” kusho uNienaber.
"UJesse noFranco bazokube begubha imidlalo yabo engu-50 futhi sinqume ukunika u-Elton ithuba lokuthi awuqale umdlalo.
“Kuzoba wusuku olukhethekile kuJesse noFranco. Bobabili balisebenzele kahle iqembu lesizwe futhi ukuziphatha kahle kwabo kubenza babe ngamalungu abalulekile eqembu lethu. Sonke siyabajabulela njengoba sebefike kuleli zinga.
“Siyamjabulela kakhulu noFrans. Ukudlala ibhola ezingeni eliphezulu iminyaka engu-15 kuyirekhodi elimangalisayo. Okwenza simshayele ihlombe kakhulu ukuthi namanje usadlala ngendlela engakhombisi ukuthi usekhulile ngeminyaka.
"Ungumdlali obalulekile enkundleni nangaphandle kwayo futhi uyisibonelo esihle kubadlali abasebancane."
AmaBhokobhoko asahlulwe kabili kuphela uma ebhekene neScotland eMurrayfield, kusukela ngo-1994, okwenzeka ngo-2002 nango-2010. Nokho, uNienaber ulindele ukuthi iqembu lasekhaya lize nokuzethemba ngemuva kokuguqisa iWales ngempelasonto edlule.
“IScotland iyiqembu eliyingozi eligcwele abadlali abanamava nabanye abebeseqenjini leBritish & Irish Lions. Asizikhohlisi nakancane ngoba siyayazi inselelo esilindele,” kusho uNienaber.
AmaBhokobhoko azoqedela uhambo lwawo lwase-Europe uma esebhekene ne-England eTwickenham, ozolandela lona weScotland.